ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သင်သတိထားသင့်တဲ့အချက်တွေ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » ၀က်ခြံ » ၀က်ခြံအမာရွတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သင်သတိထားသင့်တဲ့အချက်တွေ
ရေးသားသူ Dr. Su Sandy ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win.
ဝက်ခြံအမာရွတ်ကို ကြားဖူးပါသလား။ ၎င်းကို မကြားဖူးလျှင် အောက်ပါ ဆောင်းပါးတွင် ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
အရေပြားသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ နေရာအားလုံးကို ဖုံးအုပ်ထားသော အရာဖြစ်သည်။ ပိုးသားကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး အနည်းငယ် စုတ်ပြဲသွားလျှင် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။ မီးလောင်ခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်းတို့သည် အရေပြားတွင် အမာရွတ် ဖြစ်စေပါသည်။ အမာရွတ်ဖြစ်ခြင်းသည် သဘာဝအတိုင်း အနာကျက်စေသော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆဲလ်များကောင်းစွာ မကြီးထွားလာသောအခါ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဒဏ်ရာရခြင်း၏ သက်သေတစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရစ်သည်။
ဝက်ခြံ အမာရွတ်သည် အဘယ်နည်း
ဝက်ခြံအမာရွတ်သည် ဝက်ခြံ ပျောက်သွားသောအခါ ကျန်ရစ်တတ်သည့် အမာရွတ်ဖြစ်သည်။ ဂရုစိုက်၍ ထိရောက်စွာ ကုသလျှင်ပင် အမာရွတ် ကျန်နိုင်သည်။
ပထမဆုံး အနေဖြင့် သင်သည် ဝက်ခြံကို ကောင်းစွာ ဂရုစိုက်ပြီး ဆိုးရွားမလာစေရန် ကာကွယ်ရမည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် နောက်ဆက်တွဲ ရလဒ်ကို သတိပြုရမည်။ ဝက်ခြံ အမာရွတ်သည် သင့်ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်စေသော်လည်း သင့်ပုံပန်းသွင်ပြင်ကို ထိခိုက်စေသည်။
ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်သော အမာရွတ်သည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အန္တရာယ် မဖြစ်စေသော်လည်း တစ်သက်လုံး မပျောက်ဘဲ ရှိနေနိုင်သည်။ ကုသမှုများသည် အပြည့်အဝ ပျောက်ကင်းအောင် မလုပ်နိုင်သော်လည်း ထိရောက်စွာ ကုသခြင်းဖြင့် အမာရွတ်ကို သက်သာစေသည်။
What you should know about anesthesia. http://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/what-you-should-know-about-anesthesia. Accessed June 2015.
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် အဘယ့်ကြောင့် ဝက်ခြံအမာရွတ် ဆက်ရှိနေပါသနည်း